Fampianarana : hatsaraina ny taranja anglisy | NewsMada
Fampianarana : hatsaraina ny taranja anglisy
Mampivelatra amin’ny sehatra maro ny fifehezana ny teny anglisy. Izany indrindra no antony hanatsarana ny fampianarana taranja anglisy eny amin’ny lycée.
Nifarana ny zoma teo ilay zaikabe nandritra ny efatra andro izay notontosaina tao amin’ny CRINFP Benasandratra, niarahan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena tamin’ny alalan’ny Direction des Etudes et de la Recherche Pédagogique (DERP) sy ny masoivoho amerikanina nisalahy.
Tanjon’ny zaikabe ny hanatsarana ny fandaharam-pianarana teny anglisy eny anivon’ny ambaratonga faharoa (lycée). Ao anatin’izany ny fiompanana bebe kokoa any amin’ny atao hoe “Approche Communicative” mba ho tena teny fampiasa amin’ny andavanadro mihitsy ny teny anglisy fa tsy mijanona ho taranja any an-tsekoly fotsiny ihany.
Marihina fa tafiditra ao anatin’ny fandaharanasan’ny minisitera ny teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana na Plan Sectoriel de l’Education (PSE) ny fanatsarana ny fandaharam-pianarana. Nivoaka nandritra izay efatra andro izay ny soso-kevitr’ireo mpizaika mikasika izay fanatsarana izay. Eo koa ny boky torolalana ho an’ ireo mpampianatra mba hanamorana ny fampiharana io fandaharam-pianarana vaovao io, izay kasaina hampiharina manomboka ny taom-pianarana 2017-2018.
Nandray anjara mavitrika tamin’ny zaikabe ireo mpampianatra teny anglisy miisa 50 avy amin’ny faritra 22, ny masoivoho amerikanina, ny mpampianatra avy amin’ny anjerimanontolo, ireo ho mpiofana ho mpampianatra ao amin’ny ENS, ny mpampianatra avy amin’ny sehatra miankina sy ny tsia ary ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy ao amin’ny Peace Corps Madagascar.
Mampivelatra amin’ny sehatra maro ny fahaizana teny anglisy
Varavarana lehibe misokatra any amin’ny fivelaran-tsaina sy ny fivelarana amin’ny ankapobeny mihitsy ny teny anglisy izay efa mihoatra ny 20 taona izao no nampiasana azy ho fandaharam-pianarana.
Nilaza ny mpandraiki-draharaha amerikanina fa “miezaka ny masoivoho amerikana hanatsara ny lentan’ny teny anglisy ampiasain’ny Malagasy sady hampitombo araka izay tratra ny isan’ireo mpampiasa teny anglisy ireo.” Nohazavainy fa ny fianarana teny anglisy dia manokatra lalam-barotra ho an’ireo mpandraharaha malagasy, manokatra ny varavaran’ireo sekoly ambony miankina na tsy miankina any Etazonia ho an’ireo mpianatra malagasy, manamora ny fahazoana vaovao, ary indrindra “manamora ny fanatrarana ny tanjona hametraka ny fifankahazoana eo amin’ny vahoakan’ny firenena roa tonta.”